Big Bag MP3 Download | MP3 Free Download All Songs
Way Thwar Lel
အရင်တိုင်းရန်ကုန် part 1.5 (Single)28 Apr 2020
Website Promo3 Sep 2019
Anger Management25 Dec 2018
I.D.G.A.F1 Mar 2015
One Eleven27 Jan 2015
Big Bag Album & Songs - Play Big Bag songs online at Joox, Best of Big Bag and greatest hit album by Myanmar - Punk Rock singer are now online streaming. Listen to your favourite Big Bag singles, and hit songs now!
Big Bag အဖွဲ့သည် အဆိုတော် ၊ ဂစ်တာသမား ဟန်ထူးလွင်(ခ) ကျားပေါက်မှ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်မြန်မာရော့ခ်ဂီတအဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်တီးဝိုင်းရဲ့အဓိကပွဲဦးထွက် ဗီလိန် ဖြန့်ချိပြီး အောင်မြင်မှုများရရှိကာ ဂီတလောကတွင်ထိပ်တန်းအဖြစ်ရပ်တည်နေပါသည်။ အယ်လ်ဘမ် စုစုပေါင်း ၈ ချပ်ဖြန့်ချီခဲ့ပြီး အနုပညာရှင်များစွာနှင့်အတူတူဖန်တီးထားသောသီချင်းများစွာလည်းပါဝင်သည်။
Big Bag ၏အကြီးမားဆုံးမှတ်တိုင်အချို့မှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
-	Successful consecutive one band show - The Big Show in Bag 1/2/3 and WDGAF.
-	Most requested song - Kyone Yin Pyaw Pay Par ( City FM )
-	Freshest Song of the Year - Thee Khan ( Myanmar Music Award )
-	The best monsoon season of Rock Song Thee Khan
Kyar Pauk ( Lead Vocalist/ Guitarist )
Ye Zaw Myo ( Bassist )
Mung Boih ( Drum )
Phyo Min Naing ( Keyboard )
Reference: 360Beatz Data